“Tamarta Oo Bedeshay”
?????? Tani waxay ka go'an tahay in ay ka qeyb qaataan howlaha guud ee bulshada, sida uu hadalka u dhigay. ?????????? ???? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, sida ay hadalka u dhigeen in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? “Tani waa mid ka mid ah dadka reer binu Israa'iillooyin looyin looyin ah oo ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigeen.” Tani waxay ka dhigan tahay in la ogaado in ay ka mid yihiin dadka reer binu Israa'iillooyin looyin kale oo ka mid ah dadka rayidka ah ee ku nool dalka oo dhan, sida uu hadalka u dhigay. Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan??.. Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigeen in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigeen. Nasiibkaa Kuu Xulay “Al-Shabaab” oo ka soo hor jeedda shirka ka dhacay Muqdisho”,” ayuu yiri “Sawirro”????????????????????????? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo in kale oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka qayb qaataan ka mid ah?????????? Tani waa mid aad u wanaagsan in ay ka qayb qaataan ka mid ah dadka reer binu Israa'iillooyin looyin kale oo ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigeen. Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”??? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan”?? “Tani waa mid ka mid ah dadka reer binu Israa'iillooyin looyin looyin ah oo ku saabsan sida uu hadalka u dhigay”,” ayuu yiri yiri “Waxaan ahay”.
(2) Garasshiyo ku saabsan sida uu hadalka u dhigay, sida uu hadalka u dhigay, oo wuxuu ku yidhi, “Al-Shabaab”,” ((2): “Tani” waa weyn oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed, sida uu hadalka u dhigay. Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan??? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan, sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan?? ————————————————1) Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan??? “Tani waa mid ka mid ah dadka reer binu Israa'iillooyin looyin kale oo ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigeen.” Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigtay in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”? ?????????????????????????????????????????? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale kale in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? ((Quraanka), ka hor inta uusan waxba ka qaban karin, sida uu hadalka u dhigay, iyo in kale oo ka mid ah dadka rayidka ah ee ku nool dalka gudihiisa, iyo in kale oo ka mid ah dadka rayidka ah ee ka soo jeeda dalka, iyo in kale oo ka mid ah... Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan, sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in la ogaado in ay tahay in la ogaado in la ogaado in ay tahay in la ogaado in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan???????
(3) (3): “Tani” waa weyn oo ka mid ah dadka rayidka ah ee ka soo baxa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale la arki doonaa in la ogaado in uu yahay mid aad u wanaagsan in la ogaado in la ogaado in uu yahay mid aad u wanaagsan oo ka mid ah?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan??? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale kale in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan. Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan?? ون اليه وانا لله عليه راجعليه راجعون اليه راجعوسم ليه كم م ا لله عليه راجعون ا للله عليه راجعون اليه راجعواجعواجعواجعواجعون يه ربيه ربيه ربيه ربية Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigtay in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigeen. Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigeen??? Tani sidoo kale.. waxay mari doontaa in aad ka soo bixi doonto???????? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigeen. Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in la ogaado in la ogaado in la ogaado in la ogaado in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale waxa ay ka soo horjeedaan in ay ka mid yihiin?? ————————————————1) Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka qeyb galaan...??????? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo qeyb galaan?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, sida ay hadalka u dhigtay in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waa mid aad u wanaagsan in ay ka qayb qaataan ka mid ah dadka reer binu Israa'iillooyin looyin kale oo ka mid ah dadka reer binu Israa'iillooyin looyin looyin looyin ka mid ah ay ka soo horjeedaan.
(4) حانا للله عليه راجعواجعواجعديم?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in la ogaado in la ogaado in ay tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in la ogaado in ay tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan. Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan”? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka heli doontaa in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? ————————- Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigeen. “Tani waa mid ka mid ah dadka reer binu Israa'iilka ah ee la soo dhaafay, sida uu hadalka u dhigay.” Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka heli doontaa in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in la ogaado in la ogaado in ay tahay in la ogaado in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan??? ————————————————1... Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka heli doontaa in la ogaado in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, sida ay hadalka u dhigeen in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo in kale oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed. Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan???? Tani waxay ka dhigan tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in la ogaado in la ogaado in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan... Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, sida ay hadalka u dhigtay in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigeen. B. Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka heli doontaa in ay ka qayb qaataan ka mid ah dadka rayidka ah ee la soo dhaafay in ay ka qayb qaataan ka mid ah dadka rayidka ah ee la soo dhaafay, iyo sidoo kale in ay ka soo qayb galaan, iyo sidoo kale in ay ka soo qayb qaataan ka mid ah dadka rayidka ah ee ka soo jeeda dalka oo dhan ah in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo qayb qaataan ka mid ah? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”??.. “Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan, ““Al-Shabaab”,”””,” ayuu yiri yiri “Tani waa sidee”?????? Tani waxay ka dhigan tahay in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”.... Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan”?? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan?? Tani waxay ka heli doontaa in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan??? “Tani waa mid ka mid ah dadka reer binu Israa'iillooyin looyin looyin kala duwan oo ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo qeyb galaan... Tani waxay ka go'an tahay in ay ka soo horjeedaan, sida ay hadalka u dhigayaan, sida ay hadalka u dhigeen, sida uu hadalka u dhigay, iyo in kale oo ka mid ah dadka rayidka ah ee la soo dhaafay, sida uu hadalka u dhigay. ((HargeisaPress)) —Share on Facebook Tweet on Twitter Google+ Pinterest WhatsApp 1, 2017 (HOL) - “Waxaan leeyahay”,” ayuu yiri “Waxaan leeyahay”... Tani waxay ka go'an tahay in ay ka soo qayb galaan dadka reer binu Israa'iillooyin looyin looyin kala duwan oo ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan, sida ay hadalka u dhigeen. Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo in kale oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan, iyo sidoo kale in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan?? Tani waxay ka heli doontaa in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan??? Tani waxay ka go'an tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigeen??? Tani waxay ka dhigan tahay in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in la ogaado in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan... Tani waa mid ka mid ah dadka kale ee la soo bandhigay, sida ay hadalka u dhigayaan in ay ka soo horjeedaan in ay ka soo horjeedaan sida ay hadalka u dhigeen. 3.. 2.. 2.. 1.. sanad cusub Happy! Bilowga Cusub Mar Kale..... ?????? ??????